China U Uhlobo lweengcingo zabenzi kunye nabathengisi | Isinyithi seShoufan
Ucingo olumilise u-U lusebenzisa ucingo oluphakathi oluphakathi njengentsimbi ekrwada, kwaye imveliso igobele kwi-U-umilo ngetekhnoloji, ekulungeleyo ukubopha kwaye konga ixesha. Amplitude emise u-U inokulawulwa ngokukhululekileyo, kwaye ubukhulu bayo buhambelana neemfuno zabathengi.
Ucingo olumilise u-U lusebenzisa ucingo oluphakathi oluphakathi njengentsimbi ekrwada, kwaye imveliso igobele kwi-U-umilo ngetekhnoloji, ekulungeleyo ukubopha kwaye konga ixesha.
Amplitude emise u-U inokulawulwa ngokukhululekileyo, kwaye ubukhulu bayo buhambelana neemfuno zabathengi.
Ucingo olumilise u lube nomphezulu ophezulu ocwebezelayo, kwalenza ucingo olumilise u-U kunye nocingo lwe-zinc olufanayo, ukunamathela okuqinileyo, kunye nokumelana; PVC wawutyabeka ucingo ezimilise u-U unokuqina okuqinileyo kunye nokuchasana nokuchasana, okuphumeleleyo kumzi mveliso wokwakha.
Izinto: I-Q195 yocingo lwe-carbon steel wire
Uphawu: umphezulu une isilungiseleli seglosi elungileyo, iyunifomu umaleko zinc, adhesion olomeleleyo, amandla umhlwa-ukuxhathisa amandla.
Ukwahlula: intambo emnyama emilise u-U, ucingo olumilise u-U, ucingo olumilise u-U, ucingo olutywinwe ngeplastikhi (i-PVC) ucingo olumilise u-U, intsimbi eyenziwe ngentsimbi engu-U, njl.
Ububanzi: 0.5mm-1.5mm, ubude 250mm-600mm.
Kananjalo ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
Ucingo olu-u lusetyenziselwa ukubopha i-rebar kwishishini lokwakha
Sebenzisa: isetyenziswa ikakhulu njengocingo olubophelelayo kulwakhiwo, okanye isetyenziselwa ukuhlanganisa izinto okanye izinto zokusetyenziswa zemihla ngemihla.
Indlela yokupakisha: Ngokubanzi ipakishwe ebhokisini, oko kukuthi, iimveliso zesilika ezimilise u-U zihlanganiswe kwimisonto emifutshane. Ibhokisi kunye nefilimu yeplastiki zikhethwe ngokobude kunye nobukhulu besiphatho ngasinye. Ifilimu yeplastiki ivulelwa ebhokisini kwaye ibeke ucingo oluqokelelweyo nganye nganye, uzicwangcise kakuhle, uzifake ngokuqinileyo, uzizalise; xa zizele, zisonge ngokuqinileyo kwifilimu yeplastiki, usonge iifilimu zeplastikhi ezigqithisileyo kude, kwaye ekugqibeleni uzitywine ngemicu yeplastiki.
Ukupakisha: 20kg / ibhokisi, 1000kg / pa, ngaphakathi zeplastiki ilaphu hessian ngaphandle okanye aluke ilaphu ngaphandle, okanye ngokwemfuneko abathengi '
25cm-65cm okanye ngokwe abathengi '
Egqithileyo Ingcingo ethe nkqo
Okulandelayo: PVC camera ucingo
Umbane wentsimbi yombane
Hot nkxu Isefu Iron Wire
Intsimbi yocingo lweNsimbi
Intsimbi yocingo lwentsimbi
Iron olukiweyo Wire
Ingcingo ethe nkqo
Intambo encinci yekhoyili
Intambo emnyama eqhotyoshelweyo